Knowledge – THE NEWS TODAY
အရမ်းကို ကြီးကြီးမှားမှား အလွဲကြီး လွဲ တဲ့ အွန်လိုင်းဈေးဝယ်မှုများ
အင် တာနက်တွင်ကျယ်လာတဲ့အခါမှာ ဈေးဝယ်သူတွေဟာ လိုချင်တာကို အိမ်ကနေ ထိုင်ရာမထဘဲ အွန်လိုင်းကနေ မှာယူနိုင်လာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ယုံကြည်မှုကလည်း အရေးကြီးပြီး တစ်ခါမှမဆက်ဆံဖူးတဲ့ ဈေးရောင်းသူတစ်ဦးဆီကနေ ကိုယ်လိုချင်တဲ့အတိုင်း ရရှိဖို့ဆိုတာလည်း မလွယ်ကူလှပါဘူး။ ပြောချင်လွန်းလို့ ပရိသတ်တွေအတွက် အွန်လိုင်းကနေ ဝယ်ယူပြီး မှားယွင်းရောက်ရှိလာတဲ့ ဟာသပုံတွေကို ဖော်ပြပေးပါရစေ။
၁. သူ ဘာ မှာခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ မသိရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပစ္စည်းချင်းမှားပို့လိုက်တာတော့ သေချာပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဟုတ်လား၊ ပုံကိုသာကြည့်လိုက်ပါတော့။
၂. လိုချင် တာက ကြိုးမပါတဲ့ AirPod အသစ်ဖြစ်ပေမယ့် ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ ပထမဆုံးမြင်လိုက်ရတာ ကြိုးဖြစ်နေတဲ့အခါ ဝယ်သူရဲ့ စိတ်ကို ခန့်မှန်းကြည့်လို့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ အွန်လိုင်းမှာတွေ့ရတဲ့ ထုတ်ကုန်ပုံတွေတိုင်း စိတ်ချလက်ချ ယုံကြည်လို့မရဘဲ သေချာကြည့်ရမယ် ဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာပါပဲ။
၃. အိုဗာဆိုက်တွေအတွက် ထုတ်လုပ်တဲ့ အသုံးအဆောင် အဝတ်အထည်တွေကိုလည်း ကိုယ်နဲ့ တော်လောက်ပါတယ်လို့ အလွယ်တကူ စိတ်မချဘဲ အတိုင်းအတာကို သိသာအောင် လုပ်သင့်ပါတယ်။ မဟုတ်လို့ကတော့ ပုံထဲကလို လူကြီးအင်္ကျီယူဝတ်တဲ့ ကလေးအလား ဖြစ်သွားမှာပါ။
၄. ငါးမန်းပုံ နားဆွဲလေးတွေကို ခရစ္စမတ်အတွက် လက်ဆောင်ပေးဖို့ ဝယ်ယူမိရာက ဒီပျက်ရှင်ပါ ဝင်သွားမယ့် သူတစ်ယောက်။ ပုံထဲကနေ အရောင်အသွေး တခြားစီ ဖြစ်နေတဲ့အပြင် တစ်ခုတည်း ဆိုတာတောင် ယုံကြည်ဖို့ တော်တော်ခက်ပါလိမ့်မယ်။
၅. ဒီလို ဘောင်းဘီတွေ ဝယ်မယ်ဆိုရင် ဆိုက်ကို သေချာဂရုစိုက်ရွေးသင့်ပါတယ်။ သင်နဲ့ ပွယောင်းယောင်း ဖြစ်နေလို့ကတော့ ဘောင်းဘီအသားတွေကနေ ထွက်လာမယ့် အသံတွေကို ခံစားရမှာမို့ပါ။
၆. ဒါမျိုးတွေကတော့ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိပါတယ်။ စတစ်ကာထဲက ကောင်မလေးက သင့်ဆီ လိုက်မလာဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။ ဝမ်းမနည်းပါနဲ့။ နောက်တစ်ခါကြိုးစားကြည့်ပေါ့။
Credit – နာမည်ကြီး
လူငယ်တိုင်း ဖတ်သင့်သော လင်မယားနေ့ မ ဟုတ်သော ချစ်သူများနေ့အကြောင်း
လူငယ်တိုင်း ဖတ်သင့်သော လင်မယားနေ့မဟုတ်သော ချစ်သူများနေ့အကြောင်း
ချစ်သူများနေ့သည် (လင်မယားနေ့) မဟုတ်ပါလို့ ပြောချင်ပါသည်… ချစ်သူများနေ့ ရောက်တိုင်း တည်းခိုခန်းများ ၊ ဟိုတယ်များတွင် စုံတွဲများဖြင့် ပြည့်နေသည်ကို နှမသားချင်း စာနာ၍ စိတ်မကောင်းစွာ ကြားသိရပါသည်…
ချစ်သူ စုံတွဲများသည် စိတ်ချင်း ချစ်၍ ရပါသည်… လူချင်း နယ်ကျွံ၍ ချစ်လို့မရပါ။
မိန်းကလေးများသည် မိမိချစ်သောသူသည် လက်ထပ်ရမည့်သူ ဟုတ် ၊ မဟုတ် မည်သူမျှ အတပ် မပြောနိုင်ပါ… အိမ်ထောင် မပြုမီ အတူနေပါက မယူဖြစ်လျှင် နောက်ဆုံး မိန်းကလေးသာ နစ်နာရမည် ဖြစ်သည်…
အိမ်ထောင် မပြုမီ အတူနေပါက အင်တာနက် ခေတ်တွင် နေရာတိုင်း၌ မျက်စိများ ရှိသဖြင့် အချိန်မရွေး အင်တာနက်ပေါ် ရောက်သွားနိုင်ပြီး မိန်းကလေးနောက်က မိဘဆွေမျိုးများ အရှက်တကွဲ ဖြစ်မည်ကို သတိပြုသင့်ပါသည်။
မိမိတို့နိုင်ငံသည် ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံ ဖြစ်သဖြင့် အနောက်နိုင်ငံများမှ အတူနေခြင်း (Living Together) ကို အားကျ၍ မရပါ… မိမိတို့ နိုင်ငံသည် အရှက်နှင့် သိက္ခာဖြင့် လူလုပ်သော နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်…
မိမိကြောင့် မိဘ ၊ ဆွေမျိုးများ အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းမည်ကို စဉ်းစားသင့်ပါသည်… မိန်းကလေး များသည် မိမိတို့ အပျိုစင်ဘဝကို တန်ဖိုးထား ထိန်းသိမ်းသင့်ပါသည်။
အင်တာနက်ပေါ်တွင် မိန်းကလေးများ အခက်အခဲရှိ၍ အပျိုစင်ဘဝကို လေလံတင် ရောင်းချရာ… မြန်မာငွေ သိန်းရာချီရ ရှိသည်ကို ကြားသိရသဖြင့် မိမိတို့၏ အပျိုစင်ဘဝကို မည်မျှ တန်ဖိုးရှိသည်ကို သိသင့်ပါသည်…
ယောက်ျားလေးများသည် မိမိဘယ်လောက်ပဲ ရှုပ်ပါစေ မိမိနှင့် လက်ထပ်မည့် မိန်းကလေးကို အပျိုစင်သာ လိုချင်သည်ကို သိသင့်ပါသည်။
ယောက်ျားလေးအတွက် (Sex)သည် တစ်ခဏတာ ၊ ထမင်းစားရေသောက် အဆင့်သာဖြစ်ပြီး မိန်းကလေးများအတွက် (Sex)မှာ ဘဝနှင့် ရင်းရမည်ကို သိသင့်ပါသည်…
ချစ်သူဘဝတွင် အတူနေခြင်းကြောင့် ရရှိသော ဆိုးကျိုးများမှာ လက်မထပ်မီ ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်းကြောင့်… မိဘ ၊ ဆွေမျိုးများနှင့် မိမိပါ အရှက်ရနိုင်ခြင်း ၊ HIV ၊ B ပိုး၊ C ပိုး စသော ရောဂါပိုးများ ကူးစက်နိုင်ခြင်း ၊
ချစ်သူကြောင့် (Sex Feeling) ကို ခံစားတတ်ပြီး ချစ်သူဖြင့် မယူဖြစ်၍ နောက်ချစ်သူတစ် ယောက်ပြောင်း ခံစားခြင်းဖြင့် နောက်ဆုံး KTV ၊ (Massage) မာဆတ်စသော ပျက်စီးခြင်းဖြင့်
လမ်းပေါ် ရောက်သွားသော မိန်းကလေးများစွာ လည်းရှိပါသည်။
ချစ်သူ ယောက်ျားလေးများကလည်း လက်မထပ်ဘဲ မိမိချစ်သူကို အတူနေပြီး ဖျက်ဆီးခြင်းသည် လူသားတို့ ရှောင်ကြဉ်အပ်သော…
ငါးပါးသီလထဲမှ (ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ)ဟူသော အုပ်ထိန်းသူရှိသော သမီးပျိုများကို ဖျက်ဆီးခြင်းဟူသော ကံထိုက်သည်ဟု သတိပြုသင့်ပါသည်…
ယောက်ျားလေးများသည် မိမိချစ်သူ၏ အပျိုစင်ဘဝကို စတင်ဖျက်ဆီးပြီး ချစ်သူ မိန်းကလေးကို မယူဖြစ်ဘဲ KTV ၊
(Massage) မာဆတ်စသော ပျက်စီးခြင်းလမ်းပေါ် ရောက်သွားပါက စတင်ဖျက်ဆီးသူသာ တရားခံ ဖြစ်သည်ကို သတိပြုသင့်သည်။
ချစ်သူ မိန်းကလေး များကလည်း မိမိကိုချစ်သော သူသည် (Sex)ကို အရင်းခံ၍ ချစ်သလား ၊
တကယ့်မေတ္တာစစ်နှင့် ချစ်သလားကို ဝေဖန် ဆန်းစစ်သင့်ပါသည်… Sex ကို အရင်းခံသော အချစ်သည် အကြာကြီး မတည်မြဲပါ…
တကယ်မေတ္တာနှင့် ချစ်သောအချစ်သာ တစ်ဘဝလုံး အကြာကြီး တည်မြဲမည်ကို သိထားသင့်ပါသည်။ ။
ပြဿ နာမတတ်သရွေ့ တော့ကောင်းတာပေါ့… ပြဿ နာတတ်လာတဲ့ အခါ မငြိမ်းချမ်းတော့ပါဘူး….. ။ ငြိမ်းချမ်း နိုင်ကြပါစေ……..
ချစ်သူများနေ့တွင် မိန်းကလေးများ အပျိုစင်ဘဝကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါစေ…….
ကျတော့် အမြွာသမီးလေး ၂ ယောက် ပစ္စည်းတစ်ခုကို လုကြတဲ့အခိုက်အတန့်မှာ သူတို့အမေနဲ့ ကျွန်တော် ဝင်ဆုံးမရာမှ အခုဒီစာကိုရေးဖို့ ဖြစ်လာတာပါ
အဆိုတော် လင်းလင်းရဲ့ ဒသန မှန်သင့်သလောက် မှန်လို့ပြန်ရှဲပါတယ်။
Sharing & Fighting
ကျွန်တော့်မှာ အမြွှာသမီးလေးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဝတ်စရာဘဲဖြစ်ဖြစ်, ကစားစရာဘဲဖြစ်ဖြစ်, စားစရာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘာပစ္စည်းဝယ်ဝယ် နှစ်ခုဝယ်ရပါတယ်။ တစ်ယောက်တစ်ခုဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။ အစကတော့ တစ်ခုစီ ဆော့လိုက်၊ လုလိုက်နဲ့ ပုံမှန်ပါဘဲ။ တစ်ရက်မှာတော့ ပစ္စည်းတစ်ခုကို လုကြတဲ့အခိုက်အတန့်မှာ သူတို့အမေ နဲ့ ကျွန်တော် ဝင်ဆုံးမရာမှ အခုဒီစာကိုရေးဖို့ ဖြစ်တည်လာတာပါဘဲ။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ဝင်ဆုံးမရင်းကနေ စကားရည်လုတဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားကြပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုတော့ “ sharing နဲ့ fighting “ ။ သူတို့အမေက မျှဝေခြင်းဆိုတဲ့ sharing ဘက်က။ ကျွန်တော်ကကျတော့ တိုက်ခိုက်,တွန်းလှန်,ရုန်းကန် ဆိုတဲ့ fight ဘက်က။ သူလဲမှန်တယ်, ကျွန်တော်လဲ မှန်တယ်။ အမှန်တရားက အရပ်မျက်နှာ မျိုးစုံမှာရှိတာကိုး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟာ လူပီသစွာဘဲ ကိုယ့်ရဲ့အမှန်တရားဟာ ပိုမှန်ကြောင်း ငြင်းခုံကြပါတော့တယ်။ ဖြစ်စဉ်ကဒီလိုပါ တစ်ယောက်ဘဲစီးလို့ရတဲ့ ရထားအရုပ်လေးတစ်ခုပေါ်မှာ သမီးတစ်ယောက်ကဆော့နေတယ်။ နောက်တစ်ယောက်က အဲဒီအပေါ်မှာဘဲစီးချင်လို့ ရှိနေတဲ့ တစ်ယောက်ကိုတွန်းချတယ်။ အရင်စီးနေတဲ့တစ်ယောက် အောက်ကိုကျသွားတယ်။ နောက်တစ်ယောက်ကတက်ခွစီးပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းစပါပြီ သူတို့အမေက ကျသွားတဲ့သမီးကိုထူပြီး တွန်းလိုက်တဲ့သမီးကို ဆုံးမဖို့ ထလာပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်ကတားလိုက်တယ်။ သူတို့အမေရပ်သွားတယ်။ ကျသွားတဲ့သမီးက ကျွန်တော့်ကို အဓိပ္ပါယ်တစ်ခုပါတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်တယ်။ သူ့ကိုလာထူမယ့်အမေကို ကျွန်တော်ကတားလိုက်တာကိုး။ တွန်းလိုက်တဲ့သမီးကတော့ မျက်နှာစပ်ဖြီးဖြီးနဲ့ပေါ့။ အဲဒီမှာကျွန်တော်က ကျသွားတဲ့သမီးကို လက်သီးကိုဆုပ်ပြ မျက်လုံးချင်းစေ့စေ့ကြည့်ပြီး တစ်ခွန်းချင်း ပြောလိုက်တယ်။ ” သမီးရထားကိုပြန်စီးချင်ရင် ပြန်တွန်းချလိုက်လေ ” လို့။ အစကတော့ ကျသွားတဲ့သမီးက နားမလည်ဘူး။
ကျွန်တော်က နှစ်ခါသုံးခါလောက် မာန်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ရုတ်တစ်ရက်ပြန်ထပြီး သူ့ကိုတွန်းတဲ့သမီးကို ပြန်တွန်းချလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ကျွန်တော့်ကိုလှည့်ကြည့်တယ်။ ကျွန်တော်တစ်သက်လုံး မေ့မရနိုင်မယ့် အကြည့်ပေါ့။ အဲဒီမှာ သူတို့အမေနဲ့ ကျွန်တော် ပြဿနာစပါပြီ။ ကလေးတွေကိုဒီလိုသင်မပေးနဲ့ မျှဝေတက်အောင်လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးရမယ်တဲ့။ ကျွန်တော်ကလဲ ပြန်ပြောတယ်။ နေရာတကာမျှဝေလို့မဖြစ်ဘူး။ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်တစ်ခုဟာ fight မလုပ်ဘဲ မရောက်နိုင်ဘူး ဆိုပြီးပေါ့။ သူတို့အမေကလဲပြော ကျွန်တော်ကလဲပြော စကားရည်လု ငြင်းခုံတွေဖြစ်ကြတာပေါ့။
ကဲ ,,ထားလိုက်ပါတော့ အဲဒီမှာကျွန်တော့်အတွက် ဒီစာကိုရေးဖို့ ဖြစ်လာပါတယ်။ ရေးတဲ့အခါမှာလဲ စာဖတ်ကောင်းအောင် ပရိတ်သတ်ချစ်အောင်မရေးဘဲ လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ လူပီသစွာရေးပါမယ်။ မတိုက်ဆိုင်တာတွေပါရင်လဲ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်ဘဲ စောရီးလို့တောင် မပြောနိုင်တဲ့အတွက် စောရီးပါ။ကဲ ,,,ဒီကိစ္စဖြစ်စဉ်မှာ ကျွန်တော်သေသေချာချာ တွေးတောပြီးစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါ အကြောင်းအရာနှစ်ခုကို ဆင်ခြင်မိပါတယ်။ အဲဒါက ‘ Books smart ‘ နဲ့ ‘Streets smart ‘ ပါဘဲ။ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် sharing သမားတွေက books smart တွေများတာပေါ့။ fight သမားတွေက streets smart တွေပေါ့ဗျာ။ ( books smart ကိုစာပေသမားများဟု မထင်မှတ်ရန်နှင့် streets smartကို လမ်းသရဲများဟု မထင်မှတ်ရန် )
ကျွန်တော်ကလမ်းပေါ်ကြီးခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ fight ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ကျေကျေနပ်နပ် ခိုလှုံတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အိပ်မက်အတွက် နည်းမျိုးစုံနဲ့ fight တယ်။ အဲဒီအချိန်တွေမှာ sharing တွေဘဲလုပ်ခဲ့ရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ အိပ်မက်ကို ကျွန်တော်ရှာတွေ့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ လုံးဝယုံကြည်ပါတယ်။ သမိုင်းလမ်းဆုံမှတ်တိုင်ဟာ ကျွန်တော့်အတွက် တစ်ချို့ညတွေမှာ ဖိုက်စတားဟိုတယ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။အဆောင်ပြန်ဖို့တစ်အားနောက်ကျရင် သွားအိပ်ဖြစ်တယ်။ အမိုးအောက်ပုရွက်ဆိပ် မရှိတဲ့နေရာရှာအိပ်ရတယ်။ မိုးကလဲတစ်ဖွဲဖွဲကျနေတာကိုး။ ကျွန်တော့်နောက်မှာ အသက်အရမ်းမကြီးတဲ့ သူတောင်းစားတစ်ယောက် အိပ်ဖို့ ရောက်လာတယ်။ အားနွဲ့တဲ့လူကိုနေရာဖယ်ပေးမလား ဆိုတဲ့ အကြည့်နဲ့ကြည့်တယ်။ ကျွန်တော့်နေရာကို ဖယ်မပေးနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော် sharing မလုပ်နိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်အိပ်ရေးဝဖို့ လိုတယ်။ နောက်နေ့ဆူးလေမှာ ဈေးရောင်းဖို့အားမွေးရမယ်။ ဖျားလို့မဖြစ်ဘူးလေ။
လှည်းတန်းမှာအခြေစိုက်တဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ marketing လုပ်တုန်းကပေါ့။ တစ်အိမ်တက်တစ်အိမ်ဆင်း record လိုက်လုပ်ရတယ်။ ( အဲဒီတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေတောင် ခုထိရှိသေးတယ် )၊ တစ်ရက် ကျွန်တော်ကျောက်မြောင်းဘက်ကို သွားဖို့ရွေးခံရတယ်။ အဲဒီမှာ လှိုင်သာယာဘက်သွားရမယ့် ဘော်ဒါတစ်ယောက် နေမကောင်းလို့ သွားရမယ့် နေရာလဲဖို့ ကျွန်တော့်ကို အကူအညီတောင်းတယ်။ကျွန်တော် sharing မလုပ်ပေးနိ်ုင်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျောက်မြောင်းမှာ ကိုမောင်မောင်ဇော်လတ်တို့ ရှိတယ်လေ။ သူတို့နဲ့တွေ့နိုင်မယ့်အခွင့်အရေးတစ်ခုကို လက်လွှတ်ပြီး sharing လုပ်ပေးရအောင် ကျွန်တော်ကအရူးမှမဟုတ်တာ။ မလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော့်အိပ်မက်တွေလေဗျာ။ အဲဒီ sharing မလုပ်ပေးမိလိုက်လို့ ရရှိလာတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုကိုပြောပြမယ် နားထောင်ကြည့်။ တစ်ကယ်ဘဲ ကိုမောင်မောင်ဇော်လတ် နဲ့ တွေ့ဆုံဖြစ်တယ်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တောင်ထိုင်လိုက်ရတယ်။ မင်းဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေတန်းစီပြီး ပြောပြဖြစ်တယ်။ သူ့ဆီကအားပေးသံတွေကြားရတယ်။ တစ်ကယ်လဲအားဖြစ်စေတယ်။ အဲဒီထက်ပိုပြီးရင်ခုန်စရာကောင်းတာတစ်ခု ထပ်ပြောပြမယ်။
ကိုမောင်မောင်ဇော်လတ်က သူ့အိမ်ကို ခေါ်သွားပြီး အခုမှရေးပြီးတဲ့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို တီးဆိုပြတယ်။ ဘာသီချင်းလဲသိလား?။ ‘ခဏလေးများ’ ထဲက ကိုလေးဆိုထားတဲ့ “ဝမ်းနည်းမှတ်တမ်း” တဲ့။ မှတ်မိသေးတယ် နေ့လည်တောင် မစောင်းသေးဘူး။ကဲပါ ဆိုလိုရင်းဆက်သွားရအောင်,,,,,နှစ်ခုထဲက တစ်ခုကိုမျှဝေပေးနိုင်တယ်။ ရှိတဲ့တစ်ခုကိုတော့ မပေးနိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်က ဘုရားမှမဟုတ်တာ။ ခဲတံတွေ အများကြီးပါလာရင်တော့ တစ်ချောင်းငှားပေးနိုင်တာပေါ့။ ကိုယ့်မှာ ခဲတံတစ်ချောင်းဘဲပါလာရင်တော့ မေ့ကျန်ခဲ့တဲ့ကောင်ကို ငှားမပေးနိုင်ပါဘူး။ တစ်ယောက်တစ်လှဲ့လဲ မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။ စာကိုအာရုံစိုက်ရဦးမယ်လေ။ sharing မှာ မျိုးစုံရှိတယ်။ နေရာတစ်ကာတော့ လုပ်လို့မရဘူး။ကိုယ့်အိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ သဘာဝတရားကြီးထဲမှာ သက်သေပြချက်တွေလုပ်ဖို့အများကြီးလိုတယ်။ ” ကိုယ်ဖြစ်တည်နေတာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ကြိုးစားမှုဟာ မမျှတရင်သတိထားရပါတယ်။ ဖြစ်တည်မှုနိမ့်ပြီး ကြိုးစားမှု များနေတာဆိုရင် တစ်နေရာရာမှာ error တက်နေပြီ။ ပြန်ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။ ဖြစ်တည်မှုမြင့်နေပြီး ကြိုးစားမှုနည်းနေရင်တော့ (ယခုခေတ် ဂီတလောကမှာ အများဆုံးတွေ့ရတဲ့အရာပေါ့) သေချာတယ် တစ်ချို့အခန်းတွေကို password ခိုးနှိပ်ပြီးကျော်ဆော့နေတာ။ စိတ်ချ အဲဒီလိုမျိုးလူဟာ sharing လုပ်လုပ် fight လုပ်လုပ် ဘယ်တော့မှ နောက်ဆုံးခန်းမရောက်ဘူး။ သံသရာချင်းထပ်ပြီး ကျွန်တော် လောင်းရဲပါတယ်။
အဲတော့,,, လောကကြီးထဲကနေ လွင့်ထွက်မသွားအောင် သက်သေပြချက်တွေခိုင်မာဖို့ လိုအပ်တဲ့ လူသားကမ္ဘာကြီးထဲမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့အိပ်မက်တွေအတွက် fight လုပ်ရပါတယ်။ လုပ်တဲ့အခါမှာလဲ smart ဖြစ်တဲ့ fight ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ အောက်တန်းကျတဲ့ fight မဖြစ်အောင် သတိထားရပါတယ်။ အကယ်၍များ အောက်တန်းကျတဲ့ fight လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်အကြံတစ်ခုပေးချင်တယ်။ အောက်တန်းကျတဲ့ sharing ကိုပိုလုပ်စေချင်ပါတယ်။ (ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ ကိုယ့်အကျိုးကို အဓိကမျှော်ကိုးပြီး အများအကျိုးကို သာမညမျှော်ကိုးတဲ့ sharing မျိုးကိုဆိုလိုပါတယ် ) ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရာခိုင်နှုန်းအများစုအနေနဲ့ sharing ဟာ ကုသိုလ်နဲ့ နီးလို့ပါ။ fight ကတော့ အ,ကုသိုလ်နဲ့ နည်းနည်းနီးပါတယ်။
ကဲကျွန်တော့်စာကို အဆုံးသတ်ရအောင်,,,,’ အဲဒါဆိုရင်ခင်များက fight လုပ်ဖို့ကလေးတွေကို ဘာ့ကြောင့်သင်ပေးရတာလဲ ‘ လို့မေးမလို့မဟုတ်လား ။ ကျွန်တော်ဖြေမယ် “ကျော်ကြားမှု,မန်နေဂျာ,သူဋ္ဌေး,အတွင်းရေးမှူး,စပယ်ရာ,CEO,ရဲမှူး,ဒရိုင်ဘာ,ဗိုလ်ကြီး,ဖီဖာဥက္ကဋ္ဌ,လေယဉ်မယ်,နည်းပြ,ကွန်ပြူတာဆရာ,အသင်းခေါင်းဆောင်,ဂိတ်စောင့်,အကြော်ဆရာ,စွန့်ဦးတီထွင်သူ,gamer,သရုပ်ဆောင်,စူပါဗိုက်စာ,အဆိုတော်,အားကစားသမား,တစ်ခုခုပညာရှင်,တစ်ခုခုပိုင်ရှင်,မော်တော်ပီကယ်,တစ်ခုခုအနုပညာရှင်,မီးသတ်သမား,ဝန်ကြီး,နာရီပြင်ဆရာ,အတွင်းဝန် စသဖြင့်စသဖြင့်စသဖြင့် ပေါ့လေ လူ့လောကရဲ့ များစွာသောအိပ်မက်တွေထဲက ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုအတွက် အောင်မြင်မှုကိုရယူဖို့ sharing တွေလုပ်နေရုံနဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ အောင်မြင်လာမယ်,ပြည့်ဝသွားမယ်ထင်လို့လား။
စောရီးပါဘဲ ,,,, အဲဒါဆို ခင်များခွက်ဆွဲဖို့သာ ပြင်ထားပေတော့။ကိုယ့်ရဲ့ အိပ်မက်အတွက် fight မယ်။ fight ပြီးကိုယ့်ရဲ့ အိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်မယ်။ ပြီးရင်တော့ လူ့ဘောင် လူ့လောကကြီးကိုအကျိုးပြုဖို့ sharing လုပ်မယ်။ ဘယ်လို fight လုပ်ကြမယ်, ဘယ်လို sharing လုပ်ကြမယ် ဆိုတာကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ဦးနှောက် ဖွံ့ဖြိုးမှု ပေါ်မှာဘဲ မူတည်ပါတယ်။Smart ဖြစ်တဲ့ fight တွေနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ရယူပြီး ဖြူစင်သော sharing တွေလုပ်ကြပါစို့ ။စာကြွင်းစာကျန် – ရေးသားမှုထဲတွင် Books smart နဲ့ပတ်သတ်ပြီး မပါဝင်ပါ,ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ် လူစုပြောဆို,ငြင်းခုံ, ဆွေးနွေး, ကြပါရန်
မအေးသောင်းပြောလာတဲ့ မိတ်ဆွေအစစ်၊ မိတ်ဆွေအတု ခွဲခြားနည်း
စိတ်ကူးထဲက အကြောင်းအရာလေးတွေကို အမြဲတမ်းရေးသားလေ့ရှိတဲ့ မအေးသောင်းက မိတ်ဆွေအစစ်နဲ့ မိတ်ဆွေ အတုကို ခွဲခြားပြောပြလာပါတယ်။
မအေးသောင်းက သူမခံယူထားတဲ့ မိတ်ဆွေအစစ်၊ မိတ်ဆွေ အတု ကို ခွဲခြားပြောပြလာပါတယ်။ မအေးသောင်းက အခုလက်တလောမှာ သူ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ စာသားလေးတွေကို ရေးသားလေ့ရှိတဲ့သူ တစ်ယောက်ပါ။
‘’သူတို့အကျိုးရှိလို့ ကိုယ့်အပေါ်ချိုသာစွာဆက်ဆံတိုင်း မိတ်ဆွေစစ်လို့သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ ကိုယ်အဆင်မပြေ တဲ့ အချိန် ကိုယ်ဒုက္ခရောက်ချိန်မှာမှ ဘယ်သူကဘယ်လိုဆက်ဆံတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ မိတ်ဆွေစစ် မိတ်ဆွေတု ကို သိရှိနိုင်ပါတယ်တဲ့’’ ဆိုပြီးတော့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက်နေ့ မနက် ၁၀ နာရီ ၄၆ မိနစ်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
အေးဝတ်ရည်သောင်းက သူ့ရဲ့ စိတ်ကူးထဲက အကြောင်းအရာလေးတွေကို မကြာခဏ စာသားအဖြစ် ချရေးတတ်ပါတယ်။ တိုက်ဆိုင်မှုရှိတဲ့ စာသားတွေဆိုရင်လည်း သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ပြန်ပြီး မျှဝေဖြစ်တယ်လို့ Duwun Media အင်တာဗျူးမှာ ဖြေဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။
‘’အဲလို့ အတုအစစ်ခွဲခြားသိပြီးရင်လည်း စိတ်ဓာတ်ကျစရာမလိုပါဘူး။ သူတို့ဆီကရတဲ့ အကောင်းဆုံး သင်ခန်းစာကို ဘဝအတွက် အကျိုးရှိရှိအသုံးချ မှတ်သားနိုင်ဖို့သာအဓိကပါ။ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်သာ ကိုယ်ရပ်ရတာမို့ သူများအပေါ်မှီခိုလွန်းတာ မသေချာပါဘူး။ ကိုယ့်အခက်အခဲတွေကို ကိုယ့်ဘာသာဖြေရှင်း တာအကောင်းဆုံးပဲမဟုတ်လား။ စူပါ စနေပါ’’ဆိုပြီးတော့ ဆက်လက်ရေးသားထားပါတယ်။
အချစ်ရေးအကြောင်းတွေအမြဲတမ်း တင်ဖြစ်နေတဲ့ အေးဝတ်ရည်သောင်းက ချစ်သူရှိတယ်လို့ဝန်ခံထားပေမယ့် အခုချိန်ထိ သူ့ရဲ့ချစ်သူက ဘယ်သူဆိုတာကိုထုတ်ပြတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ မအေးသောင်းရဲ့ ချစ်သူက သူ့ထက်လည်း ငယ်သလို မင်းသားတစ်ယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာကနေလည်း ပြောပြခဲ့ဖူးပါတယ်။
၁၀ စုနှစ်တစ်စုကျော် ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တဲ့ အေးဝတ်ရည်သောင်းဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ အနုပညာလောကထဲကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး ပရိသတ်အားပေးမှုကို ယခင်ကထက်တောင် ပိုမိုရရှိလာပါတယ်။ မအေးသောင်းဟာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပိုးထည်ဆိုင်တွေကိုလည်း ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေသူ ဖြစ်ပါတယ်။
စိတျကူးထဲက အကွောငျးအရာလေးတှကေို အမွဲတမျးရေးသားလရှေိ့တဲ့ မအေးသောငျးက မိတျဆှအေစဈနဲ့ မိတျဆှေ အတုကို ခှဲခွားပွောပွလာပါတယျ။
မအေးသောငျးက သူမခံယူထားတဲ့ မိတျဆှအေစဈ၊ မိတျဆှေ အတု ကို ခှဲခွားပွောပွလာပါတယျ။ မအေးသောငျးက အခုလကျတလောမှာ သူ့စိတျခံစားခကျြနဲ့ ကိုကျညီတဲ့ စာသားလေးတှကေို ရေးသားလရှေိ့တဲ့သူ တဈယောကျပါ။
‘’သူတို့အကြိုးရှိလို့ ကိုယျ့အပျေါခြိုသာစှာဆကျဆံတိုငျး မိတျဆှစေဈလို့သတျမှတျလို့မရပါဘူး။ ကိုယျအဆငျမပွေ တဲ့ အခြိနျ ကိုယျဒုက်ခရောကျခြိနျမှာမှ ဘယျသူကဘယျလိုဆကျဆံတယျဆိုတဲ့အခြိနျမှာ မိတျဆှစေဈ မိတျဆှတေု ကို သိရှိနိုငျပါတယျတဲ့’’ ဆိုပွီးတော့ ဖဖေျောဝါရီလ ၂ ရကျနေ့ မနကျ ၁၀ နာရီ ၄၆ မိနဈက သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျပျေါမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
အေးဝတျရညျသောငျးက သူ့ရဲ့ စိတျကူးထဲက အကွောငျးအရာလေးတှကေို မကွာခဏ စာသားအဖွဈ ခရြေးတတျပါတယျ။ တိုကျဆိုငျမှုရှိတဲ့ စာသားတှဆေိုရငျလညျး သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျမှာ ပွနျပွီး မြှဝဖွေဈတယျလို့ Duwun Media အငျတာဗြူးမှာ ဖွဆေိုခဲ့ဖူးပါတယျ။
‘’အဲလို့ အတုအစဈခှဲခွားသိပွီးရငျလညျး စိတျဓာတျကစြရာမလိုပါဘူး။ သူတို့ဆီကရတဲ့ အကောငျးဆုံး သငျခနျးစာကို ဘဝအတှကျ အကြိုးရှိရှိအသုံးခြ မှတျသားနိုငျဖို့သာအဓိကပါ။ ကိုယျ့ခွထေောကျပျေါသာ ကိုယျရပျရတာမို့ သူမြားအပျေါမှီခိုလှနျးတာ မသခြောပါဘူး။ ကိုယျ့အခကျအခဲတှကေို ကိုယျ့ဘာသာဖွရှေငျး တာအကောငျးဆုံးပဲမဟုတျလား။ စူပါ စနပေါ’’ဆိုပွီးတော့ ဆကျလကျရေးသားထားပါတယျ။
အခဈြရေးအကွောငျးတှအေမွဲတမျး တငျဖွဈနတေဲ့ အေးဝတျရညျသောငျးက ခဈြသူရှိတယျလို့ဝနျခံထားပမေယျ့ အခုခြိနျထိ သူ့ရဲ့ခဈြသူက ဘယျသူဆိုတာကိုထုတျပွတာမြိုးမရှိသေးပါဘူး။ မအေးသောငျးရဲ့ ခဈြသူက သူ့ထကျလညျး ငယျသလို မငျးသားတဈယောကျလညျးမဟုတျဘူးဆိုပွီးတော့ သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာကနလေညျး ပွောပွခဲ့ဖူးပါတယျ။
၁၀ စုနှဈတဈစုကြျော ပြောကျကှယျသှားခဲ့တဲ့ အေးဝတျရညျသောငျးဟာ ၂၀၁၇ ခုနှဈမှာ အနုပညာလောကထဲကို ပွနျလညျဝငျရောကျလာခဲ့ပွီး ပရိသတျအားပေးမှုကို ယခငျကထကျတောငျ ပိုမိုရရှိလာပါတယျ။ မအေးသောငျးဟာ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှနေဲ့ ဇာတျလမျးတှဲတှမှော ပါဝငျသရုပျဆောငျနပေါတယျ။ ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးတဈခုဖွဈတဲ့ ပိုးထညျဆိုငျတှကေိုလညျး ဦးဆောငျလုပျကိုငျနသေူ ဖွဈပါတယျ။
ရန်ကုန်သားတွေလည်း နားတော့၊ မန်းလေးသားတွေလည်း တော်တော့ နေပြည်တော်သားလာပြီ
ကိုယ်တို့နေပြည်တော်ရောက်ရင် အဝိုင်းတကာပတ်ရင်း ဒစ်လည်ရတာချည်းပဲ..
အဝိုင်းပတ်ရင်း ဒီအဝိုင်းပဲ (၃) ခါလောက်ပြန်ရောက်လာလို့ တောခြောက်တယ်မှတ်ပြီး သမ္ဗုဒ္ဓေရွတ်တဲ့ ရန်ကုန်သားတွေ မန်းသားတွေ အသာနေကြ..
ဝန်ကြီးဌာနနာမည်မေးရမလိုလို ရုံးနံပါတ်မေးရမလိုလိုနဲ့ တိုင်ပတ်ကြရတာချည်းပဲ မဟုတ်လား..
နေပြည်တော်မြို့မကို ခဏထား ….
ပျဉ်းမနားဘက်မှာတင် မင်း ရွာလည်စေရမယ်။
၁ လမ်း, ၂ လမ်းပြောလို့ ကိုယ်သွားမယ့်လမ်း ရောက်မယ်ထင်သလား..
ပေါင်းလောင်း ၁ လမ်းလား ?
ရွှေချီ ၁ လမ်းလား ?
ပန်းခင်း ၁ လမ်းလား ?
အောင်မင်္ဂလာ ၁လမ်းလား ?
ရန်အောင် ၁ လမ်းလား ?
၁ လမ်းတော့ ၁ လမ်းပဲ …
ဘုရားသွားတယ်ဆိုပြီး ရေပန်းဥယျာဉ်မှာ ကြိုးတံတားပေါ် သွားတိုးနေတဲ့သူမှန်သမျှ အတုလုပ်ထားတဲ့ လိုဏ်ခေါင်း ၂ ခုကို လက်ယာရစ် ပတ်တယ်ဆိုရင် မင်းယုံလား..
ဂျီပီအက်စ်နဲ့ကမ္ဘာပတ်နေတဲ့ တိုးရစ်တွေကို ဒဗလယ် ရိုက်လိုက်တဲ့ ကယ်ရီသမားတွေ ရှိတဲ့အခါ…
လည်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ပြည်ကြီးက တရုတ်တွေကို ဟင်းရွက်တွေ လေးဆလောက်ဈေးတင်ရိုက်နိုင်တဲ့ သပြေကုန်းက ပျံကျဈေးသည်တွေလို လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ရှိတဲ့အခါ..
ကာရာအိုကေဆိုချင်ရင်တစ်ရက်ခရီး၊ အရက်သောက်ချင်ရင် နေ့ဝက်ခရီး၊ တစ်ဆက်ထဲ အနှိပ်ခန်းသွားချင်တောင် နှစ်နာရီကြာတဲ့မြို့မျိုး နေဖူးလို့ မာန်တက်ရင် ခွင့်လွှတ်တယ်။
ဒါတောင် မီးပွိုင့်နှစ်ခုကြား တစ်ခါလောက် ယာဉ်ထိန်း လိုင်စင် အစစ်ခံဖူးပါ့မလား…
ဘယ်(၆)လမ်း၊ ညာ (၆) လမ်း ရှိတဲ့ (၁၂) လမ်းသွားပေါ်မှာ ဆိုက်ကယ်နှစ်စီး ခေါင်းချင်းဆိုင် တိုက်တဲ့မြို့ ကြားဖူးသလား
လယ်သမားတွေ စပါးလှမ်းဖို့ ပြောင်းဖူးစေ့ လှန်းဖို့ ကွန်ကရစ်လမ်းကြော တစ်ကြောစီ အပိုခင်းထားပေးတဲ့ မြို့ မင်းတို့ မြင်ဖူးသလား..
ကမ္ဘာ့အလုံခြုံဆုံး လမ်း (၂၀) သွား လမ်းမကြီးက လွှတ်တော်ရှေ့ကို ခန့်ငြားစွာ ဖြတ်သန်းသွားတယ်။
ဒါပေမယ့် လမ်းပေါ်မင်းတစ်နေကုန် လှဲအိပ်နေလည်း မင်းကို ဘယ်ကားမှ တက်မကြိတ်ဘူး၊ အဲဒီလို လုံခြုံတယ်။
ကွကိုယ် ရေငတ်မသေအောင်သာ နေ..
အထူးကုဆေးရုံတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဆေးဝါးမျိုးစုံရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေ အများကြီးရှိတယ်၊ ရောဂါမပျောက်မှာ မပူနဲ့။ မင်းရဲ့လူနာ ဆေးရုံရောက်တဲ့အထိ၊ ဆေးသွားဝယ်တဲ့လူပြန်လာတဲ့အထိ အသက်မီဖို့တော့ လိုတာပေါ့.. ??
ကြပ်ပြေးလို့ခေါ်တဲ့ကောင်တွေ ဂရုမစိုက်နဲ့… ကြပ်ကြပ်မတ်မတ်ရှိလို့ ပေါက်လွှတ်ပဲစားတွေ မနေနိုင်ဘဲ ပြေးရတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကြပ်ပြေး.. မြဲမြဲမှတ်ထား
အိုးရှင်းနဲ့ ကက်ပီတယ်ကို သုံးလေးမိုင်လမ်းလျှောက်သွားပြီး စက်လှေကားအပျော်စီးတဲ့ ဗွေးတုတ်တို့အကြောင်းမပါသေးဘူး..
ပျဉ်းမနားဈေးထဲက ဘေထုပ်တွေဝတ်၊ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ရဲ့ တောဂေါ်လီသီချင်းကို ဆောင်းဘောက်နဲ့ အကျယ်ကြီးဖွင့်ပြီး တွန့်လိမ်ကောက်ကွေး ကကြတဲ့ ဂေါ်လီမတွေအကြောင်းမပြောသေးဘူး…
နောက်ဆုံးတော့လည်း ရှုံ့မဲ့မဲ့မျက်နှာကို အသာချွေးသုတ်ရင်း..
ရွှေလယ်တောကိုတော့ ရောက်အောင်သွားပြီး ကုက္ကိုပင် နှစ်ပင်ကြားမှ ဆယ်လ်ဖီတောင်မဆွဲနိုင်၊ ငါ့ကိုရိုက်ပါအုံးဟ…
နင့်ချည်းရိုက်ပေးနေရတယ်ဟ … နဲ့ ပို့စ်အမျိုးမျိုးပေးပြီ ချလပ်ဖူးတယ် ဆိုရင် နေပြည်တော်သားတွေကို လေးစားသင့်ပြီ…
မဲသလူး ချွေးပြန် ရေငတ် ခေါင်းမူးပြီး ပြန်ကာနီးမှမျှစ်ချဉ်နဲ့ နန်းစိန်ကိတ်ကို ကားဂိတ်ကနေ ကသမ်းကရမ်းဝယ်သွားကြရတဲ့ မင်းတို့အကြောင်းလေးတွေ ကိုယ်လျှို့ဝှက်ထားပေးပါ့မယ်ကွယ်..
Credit – Aung Paing Min
ယောင်္ကျားလေးတွေ မြင်ရုံနဲ့ ရင်မခုန်ပဲမနေနိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးကို မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်း မြင်ရတွေ့ရရင် သဘောကျပါလား။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုမြင်တွေ့ရဖို့က ကံအရမ်းကောင်းမှဖြစ်မှာပါ။ တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ စိတ်ကူးလေးနဲ့ ဆက်တွေးကြည့်လို့ရလောက်အောင်လေးပဲ တစ်စွန်းတစ်စမြင်တွေ့ရတာက ပိုမိုက်တယ်လို့ မထင်မိဘူးလား။ အခု ဖော်ပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ တစ်စွန်းတစ်စလေးပဲ တွေ့ရမြင်ရပေမယ့် အမျိုးသားတွေရဲ့ အာရုံကို ညှို့ငင်ဖမ်းစားနိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေ အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘေးဘက်ရင်သားတွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကို နာမည်ကျော်မင်းသမီးတွေ အဆိုတော်အမျိုးသမီးတွေ ပွဲတက်ဝတ်စုံ ၀တ်တဲ့အခါမှာ မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ စတိုင်ကျလှပတဲ့ ၀တ်စုံတစ်ခုကို ၀တ်ဆင်ထားပြီး ရင်သားတွေရဲ့ ဘေးဘက်ကို အနည်းငယ်ကိုဖော်ပြထားတာက ရင်သားတစ်ခုလုံးကို အပြည့်အ၀မြင်တွေ့ရတာမျိုး မဟုတ်ပေမယ့် အမျိုးသားတွေရဲ့ စိတ်အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင် ဒီလိုဖော်ပြပြီး ၀တ်တတ်တာဟာ သူမအနေရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိပြီး ခေတ်ရေစီးကြောင်း နဲ့ စီးမျောနေတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။
နွေရာသီဂီတဖျော်ဖြေပွဲတွေ၊ ကမ်းခြေ ဘော်လီဘောပွဲတွေမှာ တွေ့ရတတ်ပြီး မိန်းကလေးတစ်ယောက် ရှပ်အကျီင်္ကို ပင့်တင်ပြီးချွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ အတွေ့အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ရင်သားအောက်ပိုင်း တွေကို တစ်စွန်းတစ်စမြင်တွေရတာဟာ အမျိုးသားတွေအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီး ရင်သားတစ်ခုလုံးကိုများ မြင်တွေ့ရမလားဆိုပြီး စိတ်တွေကြွတက်လာတာမျိုးတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
တကယ်တမ်းတော့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ နောက်ကျောက ဒီလောက်ကြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်းမြင်တွေ့နေကြနေရာမဟုတ်တဲ့အတွက် ထူးခြားနေတာဖြစ်ပြီး မျက်လုံး အ၀ိုင်းသားနဲ့ ကြည့်မိတတ်ကြပါတယ်။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းတွေကို ပေါ်လွင်လှပစေတဲ့ အကျီင်္တစ်ထည်ကို ၀တ်ဆင်ထားပြီး ရင်ဘတ်နေရာက ကြယ်သီးတစ်လုံးလောက်ကို တမင်ဖြုတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် အမျိုးသားတွေရဲ့ စိတ်ကူးတွေက ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရဖြစ်သွားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ ရေကူးဝတ်စုံတွေလို အများကြီးကို ဖော်ပြထားတာမဟုတ်ပေမယ့် ဖုံးကွယ်ထားတာတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာ အများကြီးရှိသေးတယ် ဆိုတာကို လှစ်ဟပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးက ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။
ယောင်ျကြားလေးတှေ မွငျရုံနဲ့ ရငျမခုနျပဲမနနေိုငျတဲ့ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျး
မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့ တဈကိုယျလုံးကို မိမှေးတိုငျးဖမှေးတိုငျး မွငျရတှရေ့ရငျ သဘောကပြါလား။ ဒါပမေယျ့ အဲဒီလိုမွငျတှရေ့ဖို့က ကံအရမျးကောငျးမှဖွဈမှာပါ။ တဈခါတဈလမှောတော့ စိတျကူးလေးနဲ့ ဆကျတှေးကွညျ့လို့ရလောကျအောငျလေးပဲ တဈစှနျးတဈစမွငျတှရေ့တာက ပိုမိုကျတယျလို့ မထငျမိဘူးလား။ အခု ဖျောပွမယျ့အကွောငျးအရာကတော့ တဈစှနျးတဈစလေးပဲ တှရေ့မွငျရပမေယျ့ အမြိုးသားတှရေဲ့ အာရုံကို ညှို့ငငျဖမျးစားနိုငျတဲ့ အမြိုးသမီးတို့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးတှေ အကွောငျးပဲဖွဈပါတယျ။
ဘေးဘကျရငျသားတှရေဲ့ဆှဲဆောငျမှုကို နာမညျကြျောမငျးသမီးတှေ အဆိုတျောအမြိုးသမီးတှေ ပှဲတကျဝတျစုံ ဝတျတဲ့အခါမှာ မွငျတှနေို့ငျပါတယျ။ စတိုငျကလြှပတဲ့ ဝတျစုံတဈခုကို ဝတျဆငျထားပွီး ရငျသားတှရေဲ့ ဘေးဘကျကို အနညျးငယျကိုဖျောပွထားတာက ရငျသားတဈခုလုံးကို အပွညျ့အဝမွငျတှရေ့တာမြိုး မဟုတျပမေယျ့ အမြိုးသားတှရေဲ့ စိတျအာရုံကို ဖမျးစားနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။ဒါ့အပွငျ ဒီလိုဖျောပွပွီး ဝတျတတျတာဟာ သူမအနရေဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယုံကွညျမှုရှိပွီး ခတျေရစေီးကွောငျး နဲ့ စီးမြောနတေယျဆိုတဲ့ သဘောပဲဖွဈပါတယျ။
နှရောသီဂီတဖြျောဖွပှေဲတှေ၊ ကမျးခွေ ဘျောလီဘောပှဲတှမှော တှရေ့တတျပွီး မိနျးကလေးတဈယောကျ ရှပျအကြီင်္ကို ပငျ့တငျပွီးခြှတျလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ အတှအေ့မြားဆုံးဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုမြိုး ရငျသားအောကျပိုငျး တှကေို တဈစှနျးတဈစမွငျတှရေတာဟာ အမြိုးသားတှအေတှကျ စိတျလှုပျရှားစရာကောငျးပွီး ရငျသားတဈခုလုံးကိုမြား မွငျတှရေ့မလားဆိုပွီး စိတျတှကွှေတကျလာတာမြိုးတှေ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
မိနျးကလေးတဈယောကျဟာ ခန်ဓာကိုယျကောကျကွောငျးတှကေို ပျေါလှငျလှပစတေဲ့ အကြီင်္တဈထညျကို ဝတျဆငျထားပွီး ရငျဘတျနရောက ကွယျသီးတဈလုံးလောကျကို တမငျဖွုတျထားလိုကျမယျဆိုရငျ အမြိုးသားတှရေဲ့ စိတျကူးတှကေ ထိနျးမနိုငျသိမျးမရဖွဈသှားတတျကွပါတယျ။ ဒါဟာ ရကေူးဝတျစုံတှလေို အမြားကွီးကို ဖျောပွထားတာမဟုတျပမေယျ့ ဖုံးကှယျထားတာတှရေဲ့နောကျကှယျမှာ အမြားကွီးရှိသေးတယျ ဆိုတာကို လှဈဟပွလိုကျတာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုမိနျးကလေးမြိုးက ပိုပွီးစိတျဝငျစားစရာကောငျးပါတယျ။